မွနျမာပွညျမှာ ဆီ တလီတာ တသောငျးကြျောတော့မညျလော – OK Media
March 9, 2022 March 9, 2022 Ok MediaLeaveaComment on မွနျမာပွညျမှာ ဆီ တလီတာ တသောငျးကြျောတော့မညျလော
ပူတငျက ရုရှား ရနေံဈေး ၃ ဆ တကျမညျဟု ခွိမျးခွောကျ၊ မွနျမာပွညျမှာ ဆီ တလီတာ တသောငျးကြျောတော့မညျလော???
ရုရှ ရနေံကို တခြို့နိုငျငံတှကေ မဝယျခငျြကွဘူး၊ ဒီတော့ရနေံဈေး တကျလာတယျ။ ရုရှကလညျး သူ့ရနေံကို မရောငျးရဘူးလို့ ပိတျလိုကျလေ၊ ကမ်ဘာမှာရနေံဈေး ဒျေါလာ ၃၀၀ ကြျောသှားမယျတဲ့ ခွိမျးခွောကျနလေရေဲ့။ စဈပှဲအတှငျး ရနေံဈေး ဒျေါလာ ၄၀ ကြျောတကျတယျ။ နောကျထပျ ဒျေါလာ ၁၅၀ ကြျောအထိ တကျလာဦးမယျ မှနျးကွတယျ။ အဓိက က ရုရှ ရနေံကို ကမ်ဘာက ရောငျးခှငျ့ ဖှငျ့ပေးမှာလား?
စီးပှားပိတျဆို့မှုနဲ့ ပိတျပဈမှာလား မဆုံးဖွတျနိုငျတော့ မရရောတဲ့ဈေးကှကျဖွဈပွီး အပိုစုဆောငျးကုနျကွရော.. ကိုဗဈကာလ ငှတှေကေလညျး တှနျးထုတျထားကွတာကိုး။ လကျရှိ ရနေံဈေးဟာ ကမ်ဘာ့စီးပှားပကျြကပျဆီကို တှနျးပို့နသေလိုလိုပါပဲ။ (Kyaw Swa Min) သတငျးအပွညျ့အစုံမှာ.. ရုရှား နိုငျငံထုတျ ရနေံ ကို တားမွဈရေး အနောကျတိုငျးက ဆကျလကျလုပျဆောငျခဲ့မယျဆိုရငျ ဂြာမနီနိုငျငံသို့ သှယျတနျး ထားတဲ့
ရုရှားရဲ့ အဓိက ဓာတျငှေ့ ပိုကျလိုငျးကို ပိတျပဈလိုကျမယျလို့ ရုရှားက ခွိမျးခွောကျလိုကျပါတယျ။ ရုရှား ရဲ့ရနေံ ကိုငွငျးပယျလို့ ရှိရငျ ကမ်ဘာ့ဈေးကှကျအတှကျ ဘေးဖွဈစတေဲ့ နောကျဆကျတှဲ ဆိုးကြိုးတှေ ဖွဈလာနိုငျပွီး ရနေံ တဈစညျကို ကနျဒျေါလာ ၃၀၀ အထိ ဈေးနှဈဆကြျော မွငျ့တကျလာနိုငျကွောငျး ရုရှား ဒုတိယဝနျကွီးခြုပျ အလကျဆနျဒါ နိုဗကျ ကပွောကွားပါတယျ။ ယူကရိနျး ကိုကြူးကြျောမှု အတှကျ ရုရှား ကို
အပွဈပေးရေး နောကျထပျ နညျးလမျးတဈရပျအနနေဲ့ အမရေိကနျက မဟာမိတျတှနေဲ့ အတူ ရုရှား ရနေံကို တားမွဈရေးလလေ့ာနတေယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အဆိုပါ အစီအစဉျကို ဂြာမနီနဲ့ နယျသာလနျတို့ ကတနင်ျလာနကေ့ ငွငျးပယျခဲ့ကွောငျး သိရပါတယျ။ ဥရောပ သမဂ အီးယူဟာ သူတို့ သုံးစှဲနတေဲ့ သဘာဝဓာတျငှရေဲ့ ၄၀ ရာခိုငျနှုနျး နဲ့ ရနေံ ၃၀ ရာခိုငျနှုနျးကို ရုရှားဆီက ရယူနတောဖွဈပွီး ထောကျပံ့ပေးပို့မှု အနှောငျ့အယှကျ ဖွဈလာမယျဆိုရငျ
အစားထိုးစရာ မရှိ ဖွဈသှားနိုငျပါတယျ။ ဥရောပဈေးကှကျမှာ ရုရှား ရနေံ အတှကျ အစားထိုးစရာ မွနျမွနျဆနျဆနျ ရှာလို့ရမှာ မဟုတျဘူးလို့ အလကျဆနျဒါ နိုဗကျ ကပွောကွားပါတယျ။ ရုရှားရဲ့ ရနေံ တငျပို့မှုကို ပိတျဆို့ အရေးယူမယျဆိုရငျ လကျတုနျ့ပွနျမှုတှနေဲ့ ရငျဆိုငျရလိမျ့မယျလို့လညျး သူက
ခွိမျးခွောကျထားပါတယျ။ ရုရှား ဟာ ကမ်ဘာ့ ထိပျတနျး သဘာဝ ဓာတျငှေ့ ထုတျလုပျတဲ့ နိုငျငံဖွဈပွီး ရနေံထုတျလုပျမှု ဒုတိယ အမြားဆုံးနိုငျငံ ဖွဈတာကွောငျ့ ရုရှား စှမျးအငျ ကဏ်ဍကို အရေးယူ ပိတျဆို့မှုတှေ လုပျမယျဆိုရငျ ရုရှား စီးပှားရေး ပိုပွီး အထိ နာနိုငျသလို ကမ်ဘာ့ စှမျးအငျဈေးကှကျလညျး
ကမောကျကမ ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။ အမရေိကနျက ရုရှားဆီကနေ သဘာဝဓာတျငှေ့ ဝယျယူနတော ၃ ရာခိုငျနှုနျး ပဲ ရှိတာကွောငျ့ အမရေိကနျဟာ မဟာမိတျတှေ မပါဘဲ သူ့ တဈနိုငျငံတညျး ရုရှားရဲ့ ဓာတျငှကေို့ တားမွဈဖို့ လုပျဆောငျ လာနိုငျတယျလို့ လလေ့ာသူတှေ ကပွောကွားပါတယျ။
ပူတင်က ရုရှား ရေနံဈေး ၃ ဆ တက်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်၊ မြန်မာပြည်မှာ ဆီ တလီတာ တသောင်းကျော်တော့မည်လော???
ရုရှ ရေနံကို တချို့နိုင်ငံတွေက မဝယ်ချင်ကြဘူး၊ ဒီတော့ရေနံဈေး တက်လာတယ်။ ရုရှကလည်း သူ့ရေနံကို မရောင်းရဘူးလို့ ပိတ်လိုက်လေ၊ ကမ္ဘာမှာရေနံဈေး ဒေါ်လာ ၃၀၀ ကျော်သွားမယ်တဲ့ ခြိမ်းခြောက်နေလေရဲ့။ စစ်ပွဲအတွင်း ရေနံဈေး ဒေါ်လာ ၄၀ ကျော်တက်တယ်။ နောက်ထပ် ဒေါ်လာ ၁၅၀ ကျော်အထိ တက်လာဦးမယ် မှန်းကြတယ်။ အဓိက က ရုရှ ရေနံကို ကမ္ဘာက ရောင်းခွင့် ဖွင့်ပေးမှာလား?
စီးပွားပိတ်ဆို့မှုနဲ့ ပိတ်ပစ်မှာလား မဆုံးဖြတ်နိုင်တော့ မရေရာတဲ့ဈေးကွက်ဖြစ်ပြီး အပိုစုဆောင်းကုန်ကြရော.. ကိုဗစ်ကာလ ငွေတွေကလည်း တွန်းထုတ်ထားကြတာကိုး။ လက်ရှိ ရေနံဈေးဟာ ကမ္ဘာ့စီးပွားပျက်ကပ်ဆီကို တွန်းပို့နေသလိုလိုပါပဲ။ (Kyaw Swa Min) သတင်းအပြည့်အစုံမှာ.. ရုရှား နိုင်ငံထုတ် ရေနံ ကို တားမြစ်ရေး အနောက်တိုင်းက ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဂျာမနီနိုင်ငံသို့ သွယ်တန်း ထားတဲ့
ရုရှားရဲ့ အဓိက ဓာတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်းကို ပိတ်ပစ်လိုက်မယ်လို့ ရုရှားက ခြိမ်းခြောက်လိုက်ပါတယ်။ ရုရှား ရဲ့ရေနံ ကိုငြင်းပယ်လို့ ရှိရင် ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်အတွက် ဘေးဖြစ်စေတဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပြီး ရေနံ တစ်စည်ကို ကန်ဒေါ်လာ ၃၀၀ အထိ ဈေးနှစ်ဆကျော် မြင့်တက်လာနိုင်ကြောင်း ရုရှား ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် အလက်ဆန်ဒါ နိုဗက် ကပြောကြားပါတယ်။ ယူကရိန်း ကိုကျူးကျော်မှု အတွက် ရုရှား ကို
အပြစ်ပေးရေး နောက်ထပ် နည်းလမ်းတစ်ရပ်အနေနဲ့ အမေရိကန်က မဟာမိတ်တွေနဲ့ အတူ ရုရှား ရေနံကို တားမြစ်ရေးလေ့လာနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဆိုပါ အစီအစဉ်ကို ဂျာမနီနဲ့ နယ်သာလန်တို့ ကတနင်္လာနေ့က ငြင်းပယ်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ ဥရောပ သမဂ အီးယူဟာ သူတို့ သုံးစွဲနေတဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ရဲ့ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း နဲ့ ရေနံ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ရုရှားဆီက ရယူနေတာဖြစ်ပြီး ထောက်ပံ့ပေးပို့မှု အနှောင့်အယှက် ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်
အစားထိုးစရာ မရှိ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဥရောပဈေးကွက်မှာ ရုရှား ရေနံ အတွက် အစားထိုးစရာ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ရှာလို့ရမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ အလက်ဆန်ဒါ နိုဗက် ကပြောကြားပါတယ်။ ရုရှားရဲ့ ရေနံ တင်ပို့မှုကို ပိတ်ဆို့ အရေးယူမယ်ဆိုရင် လက်တုန့်ပြန်မှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်လို့လည်း သူက
ခြိမ်းခြောက်ထားပါတယ်။ ရုရှား ဟာ ကမ္ဘာ့ ထိပ်တန်း သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ ထုတ်လုပ်တဲ့ နိုင်ငံဖြစ်ပြီး ရေနံထုတ်လုပ်မှု ဒုတိယ အများဆုံးနိုင်ငံ ဖြစ်တာကြောင့် ရုရှား စွမ်းအင် ကဏ္ဍကို အရေးယူ ပိတ်ဆို့မှုတွေ လုပ်မယ်ဆိုရင် ရုရှား စီးပွားရေး ပိုပြီး အထိ နာနိုင်သလို ကမ္ဘာ့ စွမ်းအင်ဈေးကွက်လည်း
ကမောက်ကမ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အမေရိကန်က ရုရှားဆီကနေ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ဝယ်ယူနေတာ ၃ ရာခိုင်နှုန်း ပဲ ရှိတာကြောင့် အမေရိကန်ဟာ မဟာမိတ်တွေ မပါဘဲ သူ့ တစ်နိုင်ငံတည်း ရုရှားရဲ့ ဓာတ်ငွေ့ကို တားမြစ်ဖို့ လုပ်ဆောင် လာနိုင်တယ်လို့ လေ့လာသူတွေ ကပြောကြားပါတယ်။